Mialoha ny fifidianana, milaza ho manavotra ny vahoaka hiala amin’ny vahohon’ireo dinôzôro ilay antoko mitàna ny lohany ao Serbia · Global Voices teny Malagasy
Mialoha ny fifidianana, milaza ho manavotra ny vahoaka hiala amin'ny vahohon'ireo dinôzôro ilay antoko mitàna ny lohany ao Serbia
Nentina ho amin'ny haavo vaovao ny fambolena tahotra
Voadika ny 20 Jona 2020 17:52 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Français, Español, Ελληνικά, English
Pikantsarin'ny lahatsarin-kira an'ny antoko politika liampivoarana serba, ahitàna dinôzôro manenjika olona iray mitety ny fotoana.
Miditra anatin'ny fahanginan'ny fifidianana i Serbia mialoha ny fifidianana voatondro hatao ny 21 Jona, izay azo heverina ho zavatra tsara.
Koa satria nanapaka hevitra hibodo izany ireo antoko matanjaka avy amin'ny fanoherana, izay nanakiana ny governemanta ho tsy nahavita nameno ireo fepetra hisian'ny fifidianana tsy mitanila — isan'izany ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety — nanana lanjany manokana ny resaka fahatongavana hifidy.
Mba hanohintohinana ny maha-ara-drariny ny antoko eo amin'ny fitondrana, nikarakara fihetsiketsehana ireo vondrona sasany avy amin'ny mpanohitra, toy ny “Aoka tsy homentsika (halentika an-drano) i Belgrade” (“Ne da(vi)mo Beograd” amin'ny teny serba).
Ny faran'izay akaiky indrindra dia nitranga teo anoloan'ny Antenimiera, niaraka tamin'ny sary famantarana, kanakàna (gàna) fingotra.
Bitsika: Androany nanoloana ny Antenimiera #Boycott2020 (#Fibodoana2020), rahampitso rehefa manao famintinana ny fitsaràna an'i Jutka ao Kruševac #RarinyHoAniMarijaLukic #RarinyHoAnIreoVehivavyRehetraAoBrus
Lahatsary: Androany isika manoloana ny Antenimiera. Antsointsika ny olompirenena mba hanatevina laharana ny fibodoana ireo sarintsarim-pifidianana hatao ny Alahady.Miara-dàlana amin'ny ady hisian'ny Serbia malalaka sy demaokratika, hisy tolona iray rahampitso ao Kruševac, ny fitsaràna ilay [lazaina ho mpanolana] Milutin Jeličić Jutka ary antenaintsika ny hivoahan'ny rariny ho an'i Marija Lukić sy ireo vehivavy rehetra ao Brus.
Ny 17 Jona, andro mialoha ny fotoana fahanginana, nanaovan'ny antoko liampivoarana serba eo amin'ny fitondrana (SNS) famintinana ilay andianà lahatsarim-pifidianana miteraka resabe, tamin'ny nitodihany tamin'ireo olona izay mety hisafidy ny tsy handeha hifidy.
Lasa niparitaka be nanerana ny Balkàna ilay lahatsary mitondra lohateny hoe “Aza milona ao anatin'ny lasa, mandehàna mifidy ho an'ny hoavy !”. Taminà feo fampitandremana, tondroin'ilay rakitsary ireo olompirenena mety hijanona an-tranony io Alahady io ho tena tomponandraikitra amin'ny fahasimban'ny toekarena sy ny korontana mety hitranga noho ny firaisankina amin'ny mpanohitra.
Hafatra iray fenoin'ny saripikan'ireo “olona lasa adala” — miady eny an'arabe sy mandroba.
Raha nijanona teo moa ilay lahatsary, dia mety hoe fambolena tahotra fotsiny ihany.
Kanefa, nikisaka nankany amin-javatra hafahafa ilay fanentanana.
Rehefa tsapanao ny hadisoana goavana vitanao, ho hitanao fa na ny hofantrano aza tsy vitanao intsony ny hanefa azy. Rehefa tsy voaloanao ny hofantrano, ny hany sisa azonao atao dia mamorona milina iray hiverenana ao anatin'ny fotoana, handehanana mihemotra ary handehanana hifidy. Rehefa mampiasa ilay milina fandehanana mihemotra ao anatin'ny fotoana sy handehanana mifidy ianao, izay noforoninao ihany, mety lasa any anatin'ny fahiny tena lavitra be any ianao ary mety lanin'ny dinôzôro iray!
Nahoana no maniry ho lanin'ny dinôzôro? Aza mijanona any amin'ny lasa, mifidiana ho an'ny hoavy!
Ilay lisitry ny SNS dia nomen'izy ireo ny anaran'ilay lehibe mpitarika azy, Aleksandar Vučić, filohampirenena amperinasa, na dia fifidianana solombavambahoaka aza no atao fa tsy fifidianana ny ho filohampirenena.
Nolanian'ny SNS nanaovana fampahafantarana ny fanindrahindràna olona ho an'i Vučić ny fanentanana nataony, tamin'ny fakàna tombony tamin'ny fandaharampotoan'ny filohampirenena mandritra ny fotoana fisian'ny valanaretina sy fitsihifana amin'ny ankapobeny ny fananam-panjakàna. Nefa tsy mahataitra ireo manampahefana miady amin'ny kolikoly izany rehetra izany.
Pikantsary avy amin'ny tranonkalan'ny antoko sôsialista ao Serbia, miaraka amin'ny teny fanevany ho an'ny fifidianana “Miorina mafy izahay” (Ми стојимо постојано).
Ny mpifaninana aminy, ny antoko sôsialista ao Serbia, mpikambana vitsy an'isa ao anatiny fiaraha-mitantana eo amin'ny fitondrana, dia nanao hadisoana ihany koa nandritra ny fampielezankevitra.
Nanao tandrevaka ity antoko ity tami'ilay lahatsariny voalohany fampielezankevitra nifototra tamin'ny fehezanteny hoe “Matokia anay” — tao anatinà hira fitiavan-tanindrazana Yogoslavy izaylasa nalaza tamin'ny fotoan'androny — tamin'ny nanaovany ho ivo ny fomba fandehan'ireo mpifidy ho toy ny an'ireo lolo vokatra.
Ny teny fanevan-dry zareo “Miorina mafy izahay” (“Mi stojimo postojano” amin'ny teny serba) dia notsongaina mivantana avy tamin'ilay hira “Eh, ry Slavy” – hirampirenena'i Yogoslavia talohan'ny nivakisany.
Miorina mafy izahay
toy ireo harambato goavana,
ho voaozona anie, izay mpamadika
ny firenena nahaterahany!
Ironan'ireo lahatsary fanentanana ofisialy ataon'ny SPS ny mozikan'ny Yogoslavia teo aloha, toy ireo hiran'ny mpiaradia mpanohitra ny fasista tamin'ny Ady Lehibe Faharoa, toy ilay hoe “Hatreny an-dohasaha ka hatreny an-tampon-kavoana”.
Ny eson'ny zavamisy dia io antoko io sy ilay mpitarika azy efa nodimandry, Slobodan Milošević, no tena nisehatra tao anatin'ny famotehana tanaty rà nandriaka an'i Yogoslavia, ary tena notsinontsinoavin'ireo media mahazatra hatrizay.
Nohamaivanina ihany koa ireo tsy fanjariana (tsy fifandrifiana) ideolojika. Toy ilay zavamisy hoe sarin'ilay Serba minisitry ny raharaha ivelany, Ivica Dačić, mpitarika azy no lasa sary mibahana toerana amin'ny tranonkalan'ny antoko sôsialista, niaraka naka sary tamin'i Donald Trump — politisiana iray heverina ho tena mifanohitra amin'ny atao hoe sôsialista.
Raha tsy jerena ireo hevitra mifanohitra ireo, mivonona ny hifidy ny ao Serbia. Mijanona ho ankamanatra ny isan'ireo nanaraka ilay fibodoana mandra-pahatongan'ny alin'ny Alahady.